Praiminisitra Etiopiana Ahmed Abiy, mpivavaka tsara, Kristianina, loka Nobel fandriampahalemana 2019 | Apg29
Praiminisitra Etiopiana Ahmed Abiy handray ny Loka Nobel 2019 ho fanatrarana tamin'ny fiadanana sy voavaha ny mifanohitra amin'ny mpifanolo-bodirindrina Eritrea.
Abiy Ahmedt lasa praiminisitra tamin'ny Aprily 2018. Rehefa afaka volana vitsivitsy, dia nahazo ny fifanekem-pihavanana amin'ny mpifanolo-bodirindrina Eritrea. Efa ela ny firenena efa fahavalo.
Norvezy ny Nobel Foundation dia nanambara fotsiny izao fa ny Praiminisitra Etiopiana Ahmed Abiy handray ny Loka Nobel tamin'ny 2019. Izy no ho fanatrarana ny fiadanana sy voavaha ny mifanohitra amin'ny mpifanolo-bodirindrina Eritrea.
Fiadanana in Eritrea
Ary mahazo ny fandriampahalemana Loka ho an'ny "ny ezaka mba hahazoana ny fiadanana sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, indrindra noho ny fitsikerana fandraisana andraikitra mba hamahana ny sisintany mifanohitra amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy Eritrea".
I Ahmed - miaraka amin'ny soedoa toetr'andro mafana fo Greta Thunberg - iray amin'ireo favoris be izay naminavina momba ny vidiny. Rehefa mahazo flaccid tahotro marina fa ny vidiny ho nividy - na dia ny papa afaka mahazo izany.
Nanova ny Horn Afrika
Praiminisitra Etiopiana Ahmed Abiy dia nanova tanteraka ny Tandrok'i Afrika sy ny vaovao tsipika milamina kokoa, tsy ny kely indrindra eo amin'ny lafiny ny fifanekem-pihavanana tamin'ny fahavalony Eritrea.
Ahmed efa nandritra ny fotoana eo amin'ny fitondrana, koa anisan'izany ny fifidianana malalaka nampanantenaina, namoaka gadra politika sy voahenjika manam-pahefana maro voampanga ho fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Tena tsara fa raha ny marina dia olona iray izay niasa ho amin'ny fandriampahalemana izay nahazo ny loka fa tsy amin'ny olona iray mpikatroka mafàna fo toetr'andro na banky, izay mbola nitranga teo aloha.
feno fanoloran-tena kristianina
Ankoatra izany, ny Praiminisitra Etiopens ny mpivavaka kristianina sy ny mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina Etiopiana Pentekotista Full Gospel Fiangonana ny mpino. Izany ihany koa ny taona faharoa ao amin'ny andalana fa ny olona kristianina izay mpikambana ao amin'ny hetsika Pentekotista Loka Nobel Fandriampahalemana. Tamin'ny taon-dasa dia nahazo ny mpitandrina sy ny dokotera Denis Mugwege.
Ny farany fandriampahalemana folo laureates
2018: Dokotera Denis Mukwege avy any RDC sy yazidiska Nadia Murad avy any Iraka.
2017: fanentanana iraisam-pirenena hanafoana fitaovam-piadiana nokleary, Ican.
2016: Kolombiana Juan Manuel Santos ny Filoha.
2015: Toniziana National Dialogue quartet.
2014: mpiaro ny zon'ny Ankizy Malala Yousafzai ao Pakistan sy Kailash Satyarthi any India.
2013: Ny Fikambanana ny Fandrarana ny Fitaovam-Piadiana Simika, OPCW.
2012: Ny Vondrona Eoropeana, Vondrona Eoropeana.
2011: Ny Filoha Ellen Johnson Liberiana Sirleaf, Liberiana fiadanana Leymah Gbowee mpikatroka sy mpanao gazety Yemenita Tawakkol Karman sy mpikatroka mafàna fo.
2010: Shinoa mpanohitra Liu Xiaobo.
2009: Ny Filoha Barack Obama US.
V 02, fredag 15 januari 2021 kl 21:56